IRose Villa 2 Amagumbi okulala ayi-2 Amagumbi okuhlambela ayi-2 - Iphuli Yokubona Igadi - I-Airbnb
IRose Villa 2 Amagumbi okulala ayi-2 Amagumbi okuhlambela ayi-2 - Iphuli Yokubona Igadi
Indlu enendawo yokuphola yonke sinombuki zindwendwe onguHanoi By Night
UHanoi By Night unezimvo eziyi-66 zezinye iindawo.
- SINIKEZELA★ NGEENKONZO eziyi-4
- Sinendawo yokuhlala, ivenkile yokutyela, ipuli ephandle, ibhari nendawo yokuphumla esetyenziswa nangabanye abantu.
I-Villa ine-Wi-Fi yasimahla kuzo zonke iindawo kunye nendawo yokupaka esimahla eseyadini. Isidlo sakusasa se-buffet sansuku zonke siyafumaneka nangakumbi
★ Ukucoca yonke imihla ngerenti emfutshane, iintsuku eziyi-2 ngeveki xa urentisa ixesha elide
Amanzi★ asimahla, ikofu kunye neti
★ Ukubhalisa xa ufika nokuphuma kulula kakhulu xa ufika naxa ufumana abantu abamkela iindwendwe imini nobusuku
Indlu yethu enendawo yokuphola iza kuba yindawo efanelekileyo yokuchitha ixesha lakho lokuphumla kufutshane neHanoi. Ngoyilo lwale mihla kunye nabasebenzi abaziingcali, siza kukwenza uzive usekhaya.
- Igumbi lethu linefenitshala eqoqoshiweyo enazo zonke izinto ezinokusetyenziswa eziyimfuneko kunye neenkonzo zegumbi lepomakazi eliqhelekileyo leenkwenkwezi eziyi-4.
- Le ndlu yenziwe ngobuchule kwindawo enamagumbi okulala ayi-2 anefenitshala epheleleyo.
- Ngokubona igadi ukuze wonwabele umoya, umoya omtsha, kunye nemozulu entle.
- Iinkonzo zokucoca nokuhlamba iimpahla zemihla ngemihla zeendwendwe ngoxa iindwendwe zihlala ixesha elide zinokucela ezi nkonzo nanini na
Lo mbuki zindwendwe unezimvo eziyi-66 ngezinye indawo zokuhlala. Veza ezinye izimvo
Sineendawo ezintle kakhulu ezaliswe ziinkonzo nezinto zokonwaba. Kufuphi kukho iindawo ezininzi ezahlukeneyo zokubuka iBa Vi, enye yezona ndawo zidumileyo omele uye kuzo eBan Xoi. Ngaphandle koko, zininzi iivenkile zokutyela zasekuhlaleni onokukhetha kuzo, ukusuka ekutyeni kwaselwandle ukuya ekutyeni okwahlukileyo. Lungiselela isisu sakho!
Umbuki zindwendwe ngu- Hanoi By Night
Iilwimi: 中文 (简体), English, Français, 日本語, 한국어, Русский, Español